AHOANA NY FOMBA AHAZOANA MIVERINA AMIN'NY GOOGLE SEARCH BAR AMIN'NY EFIJERY ANDROID HOME - MALEMY
Manomboka amin'ny fisehoan'ny efijery an-trano (raha vao tsy mifangaro vaovao) mankany amin'ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny ankapobeny, misy zavatra vitsivitsy izay nanjary azo antoka tamin'ny fitaovana Android. Ny efijery fampiasa an-trano dia misy ireo sary fampiharana fanao mahazatra 4 na 5 eo amin'ny seranan-tsambo, sary famantarana hitsin-dalana vitsivitsy na folder Google eo ambonin'izy ireo, widget iray famantaranandro / daty ary widget fikarohana Google. Ny widget bara fikarohana an'ny Google, tafiditra ao amin'ny app Google, dia mora satria miantehitra betsaka amin'ny motera fikarohana amin'ny karazan-baovao rehetra izahay. Manomboka amin'ny ATM na trano fisakafoanana akaiky indrindra ka hatramin'ny hoe inona no dikan'ny teny iray, ny olona antonony dia manao fikarohana 4 hatramin'ny 5 farafahakeliny isan'andro. Raha jerena ny zava-misy fa ny ankamaroan'ireo fikarohana ireo dia natao mba hahazoana topy maso haingana, ny widget fikarohana Google dia mijanona ho ankafizin'ny mpampiasa ary efa namboarina ho an'ny fitaovana Apple manomboka amin'ny iOS 14.
Android OS dia mamela ny mpampiasa hanamboatra ny efijery an-tranony araka izay tiany ary hanala na hanampy widget isan-karazany, ankoatry ny zavatra hafa. Mpampiasa vitsivitsy matetika no manala ny bara fitadiavana Google hahatratrarana fijery madio kokoa / kely fotsiny amin'ny sarin-dokambarotra tena ilaina sy ny widget misy ny famantaranandro; ny hafa manala azy io satria tsy mampiasa azy io matetika ary maro no tsy mamafa azy tsy nahy. Soa ihany fa mora ny mitondra ny widget amin'ny fikarohana amin'ny efijery Android anao ary hitondra anao latsaky ny iray minitra. Araho fotsiny ny torolalana ato amin'ity lahatsoratra ity, dia ho hitanao ny fomba manampy ny bara fikarohana Google na widget hafa miverina amin'ny efijery Android anao.
Ahoana ny fomba hamerenana ny Google Search Bar ao amin'ny efijery Android Home?
Voalaza teo aloha, ny widget fikarohana Google haingana dia tafiditra ao amin'ny fampiharana Google fikarohana, ka alao antoka fa napetrakao amin'ny fitaovanao io. Ny rindranasa Google dia apetraka amin'ny toerana misy azy amin'ny alàlan'ny fitaovana Android rehetra, ary raha tsy hoe mamafa azy io amin'ny tanana ianao dia hanana ilay fampiharana ilay findainao. Raha mbola eo ianao dia havaozy ihany koa ilay fampiharana amin'ny kinova farany ( Google - Fampiharana amin'ny Google Play ).
1. Miverina amin'ny efijery Android findainao ary tsindrio lava (paompy ary tazomy) amin'ny faritra foana . Amin'ny fitaovana sasany, azonao atao ihany koa ny manintona anatiny avy eo amin'ny sisiny hanokatra ny menio fanovana efijery an-trano.
2. Ny hetsika dia handrisika ny safidin'ny fanamboarana Home Screen hiseho eo ambanin'ny efijery. Miankina amin'ny atin'ny mpampiasa, avela hanova ny takelaka takelaka fonenana isan-karazany ny mpampiasa.
Fanamarihana: Ny safidy roa fanaingoana fototra misy amin'ny UI rehetra dia ny fahafaha-manao ovay ny sary an-tsaina ary ampio widgets amin'ny efijery an-trano . Ireo fanaingoana mandroso toy ny haben'ny takelaka fanovana desktop, mifamadiha amina fonosana amina antoko fahatelo, layout an'ny mpandefa sns dia misy amin'ny fitaovana voafantina.
3. Tsindrio eo gadget hanokatra ny menio fisafidianana widget.
4. Kitiho ny lisitr'ireo widget misy Fizarana Google . Ny rindrambaiko Google dia manana widget an-trano vitsivitsy vitsivitsy mifandraika aminy.
5. To ampio ny bara Fikarohana Google miverina amin'ny efijery an-tranonao , marina tsindrio lava amin'ny widget fitadiavana, ary apetraho amin'ny toerana tianao.
6. Ny haben'ny bikan'ny karoka fikarohana dia 4 × 1 , fa azonao atao ny manitsy ny sakany amin'ny safidinao amin'ny alàlan'ny fanindriana lava amin'ny widget sy misintona na mivoaka ny widget. Araka ny miharihary, ny fitarihana ny sisintany mankany anatiny dia hampihena ny haben'ny widget ary ny fitarihana azy ireo hampitombo ny habeny. Raha te hamindra azy amin'ny toeran-kafa amin'ny efijery an-trano, tsindrio lava ny widget ary raha vao mipoitra ny sisin-tany dia sintomy izay tianao.
7. Mba hamindra izany amin'ny tontonana hafa, hisintona ny widget mankany amin'ny sisin'ny efijeryo ary tazomy ao mandra-pahatonga ny tontonana ao ambany hamadika ho azy.
Ankoatra ny widget fikarohana Google, azonao atao ihany koa ny mandinika manampy Widget fikarohana Chrome izay manokatra ho azy ny valin'ny fikarohana ao amin'ny takelaka Chrome vaovao.
Esory ny bara Fikarohana Google avy amin'ny Android Homescreen
Ahoana ny famonoana ireo fampiharana Android mihazakazaka ao ambadika
Ahoana ny fitrandrahana ireo fifandraisana amin'ny vondrona WhatsApp
Dia izay; afaka nanampy ny bara fikarohana Google niverina teo amin'ny efijery finday Android anao fotsiny ianao. Araho ny fomba mitovy amin'izany hanampiana sy hanamboarana Widget hafa amin'ny efijery an-trano.
fijanonana kaody dpc_watchdog_violation windows 10
ny fanavaozana ny windows dia niraikitra tamin'ny 99 windows 10
maninona no taraiky ny ps4-ko
maninona no alt tab tsy mandeha